Deschamps: Faransiisku Ma Haysto Awoodii Uu Ku Qaadi Lahaa Koobka Aduunka
HomeWararka MaantaDeschamps: Faransiisku Ma Haysto Awoodii Uu Ku Qaadi Lahaa Koobka Aduunka
Didier Deschamps, tababaraha xulka qaranka Faransiiska ayaan aaminsanayn in xulka qaranka uu hogaaminayaa ay ku jiraan liiska xulalka loo saadaalinayo inay qaadi karaan koobka aduunka sanadkan.
France oo heerka Group-yada ku hadhay koob aduunkii 2010 ee Koonfur Afrika , sanadkana ku soo baxday si dirqi ah kadib markii ay ciyaarihii isreeb reebka kaalinta labaad ka galeen Group koodii, sida sharcigu dhigayana ciyaar hal kulan oo kooxdii badisaa baxayso (play off) ah kaga adkaatay Ukrain, ayuu Deschamps aaminsan yahay in Faransiisku dibada ka joogo liiska qaramada saadaashu u tirinayso guusha.
“Waxa jira todoba ilaa sideed xul qaran oo loo saadaalinayo inay koobkan ku guulaysanayaan. laakiin France kamid maaha xulalkaasi.” ayuu Tababare Didier ku yidhi warfidiyaha RMC.
“Markii ugu dambeysay ee xulka Faransiisku ka gudbo heerka hormada ‘Groups’ku waxay ahayd 2006 dii ciyaartii Togo ay ka guulaysteen, markaas ayaa ugu dambeysay oo ay ka baxeen xulalka ugu cad-cad Yurub iyo adduunkaba.
“Waxaan ahay looga qaateen, faanka iyo beentuna waa iga reeban yihiin. Ma idinla tahay inuu heer sare ahaa qaab ciyaareedkii xulka France ee kulankii hore ee Ukraine iyo kii is aragii dambeba. ? Waa inaan ka sii badinaa sidii aanu u ciyaarnay kulankii dambe, mar kasta iyo ciyaar kastana wax ka bedelnaa.”
Deschamps ayaa intaas kadib ka jawaabay su’aal kaftan ahayd oo la weydiiyey , taas oo u dhignayd bal inuu yahay Tababaraha Faransiiska ah ee ay is shabahaan dhigiisa Chelsea ee Mourinho.
Wuxuu isaguu qoslaya ku jawaabay : ”Ma anigaa ah Mourinhaha Faransiiska.? Maya. Maya”
“Waan la kulmay tababarayaal waaweyn oo ay kamid yihiin , Mourinho iyo Vicent del Bosque, Waana tababarayaal khibradooda ay u dheertahay nasiibka oo saacidaa. Waxaad u baahan tahay arimo badan si aad yoolkaaga u gaadho. waana inaad naftaada kalsooni ku qabtaa marka xaaladuhu kugu cakiran yihiin.”